Bayaanka Aqalka Cad ee Afgaanistaan ​​waxaa ka mid ah xoojinta ilaalinta iyo xuquuqda haweenka - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Sawir ahaan Ben Barber, USAID on Pixnio
Bayaanka Hore ee Aqalka Cad (XAQIIQDA XAQIIQDA: Sii wadida Taageerada Mareykanka ee Afgaanistaan ​​oo nabad ah Aqalka Cad, Juun 25, 2021) Kulankii Madaxweynayaasha Biden iyo Ghani ee Afghanistan waxay ka turjumayeen dareenka maamulka ee walaaca ku xusan warqadda loo diray Madaxweynaha. (U istaagida midnimada haweenka Afgaanistaan: Shuruud ah Kalaguur ku aaddan Amniga Aadanaha) oo ka socda bulshada rayidka ah iyo hoggaamiyeyaasha diinta, sida muuqata mid ka mid ah baaqyadii ugu horreeyay ee ku aaddan khataraha amniga haweenka Afgaanistaan ​​ee ka dhashay bixitaanka ciidamada Mareykanka.
Waxaan u akhrinay, ballanqaad ah in aan hubinno amniga haweenka, bayaan ku xusan sadarka labaad ee ku saabsan “ilaalinta xuquuqda dhammaan, oo ay ku jiraan haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay”Oo muhiim u ah nabadda. Qodobkan waxaa lagu sii adkeeyay tuduca soo socda ee ugu dambeeya, ee "gaaritaanka heshiis nabadeed oo waara oo ay kujirto ilaalinta xuquuqda …… haweenka. ” Awoodda ballanqaadka waxaa caddeyn u ah gargaarka muhiimka ah ee Mareykanku ku yaboohay inuu ka shaqeyn doono xaaladaha ka dhigaya heshiiskaas mid suurtagal ah. Balanqaadkani wuxuu daba socdaa qadarka weyn ee gargaarka ee samafalayaasha gaarka loo leeyahay ay dhawaan sameeyeen si loo joogteeyo loona hormariyo guulaha bulsho iyo dhaqaale ee ay gaareen dumarka reer Afghanistan 20kii sano ee la soo dhaafay.
Waxaan ugu yeeraynaa magacaabista Jean Arnault inuu noqdo wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee arrimaha Afghanistan iyo arrimaha gobolka, waxaan u aragnaa inay calaamad u tahay rabitaanka Aqalka Cad inuu adeegsado awooda nabadeynta iyo dhismaha awoodaha hay'adda adduunka. Warqadda bulshada rayidka ah iyo hoggaamiyeyaasha iimaanka waxay ka codsadeen Nabad Ilaalinta Qaramada Midoobay inay sugto amniga dadka reer Afgaanistaan ​​inta lagu jiro xilliga kala guurka ee bixitaanka.
Waa wax laga xumaado in warbaahintu ka warbixiso kulanka (eeg, tusaale ahaan, NYTimes: “Biden wuxuu yiri Afghanistaanku waa inay 'go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda' maadaama Ciidamada Mareykanka ay ka baxayaan“) Waxbadan kama sheegin amaba ma xusin amniga haweenka, mana suuragalin karno geedi socod nabadeed oo wax ku ool ah kaas oo ku lug leh ka qeybgalka Qaramada Midoobay. Waxaan rajeyneynaa in akhristayaasha iyo xubnaha ka tirsan Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada ee wadaaga rajada nabada bina aadamka ee Afgaanistaan ​​ay ku boorin doonaan labada dowladood iyo hogaamiyayaashooda u gaarka ah inay ugu baaqaan bulshada caalamka masuuliyadeeda sida dowladaha xubnaha ka ah Qaramada Midoobay si loo ilaaliyo xuquuqda aadanaha dhamaan.
# ilaalinta nabada
# dumarka nabadda & amniga
August 15, 2021 Digniinta Waxqabadka, Warar & Muuqaal 1
Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay wuxuu meel mariyey qaraar ku saabsan Dhalinyarada, Nabadda iyo Amniga
December 9, 2015 Siyaasadda 0
(Maqaalka asalka ah: United Network of Young Peacebuilders, Dec. 9, 2015) On 9 December 2015 Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay waxay meel mariyeen qaraar 2250 oo ku saabsan Dhalinyarada, Nabadda & Amniga. Dukumintiga taariikhiga ahi waa [sii wad akhriska…]